Daawo: Puntland oo ka dhawaajisay in laga soo weeraray Koonfurta Soomaaliya - Hablaha Media Network
Daawo: Puntland oo ka dhawaajisay in laga soo weeraray Koonfurta Soomaaliya
HMN:- General Saciid Dheere, oo ah Taliyaha ciidanka Daraawiishta maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaalkii dhawaan ka dhacay tuulada Af-urur ay ku dileen 25 dagaalyahanno oo ka tirsanaa Al Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sar sare.
“Qorshaha maamulka hadda waxaa uu yahay sidii amniga loo adkeyn lahaa, kooxaha argagixisadana talaalabii ugu habooneeyd looga qaadi lahaa”, sidaas ayuu hadalkiisa uu sii raaciyay Taliyaha.
Xarakadda Alshabaab ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidamada maamul-gobolleedka Puntland.
Waxay sheegeen in ay halkaas ku dileen 61 askari oo ka tirsan ciidamadii saldhigaa joogay ayna qabsadeen 16 gaari.
Sidoo kale Maamulka Puntland ayaa ka dhawaajiyey halka ay asal ahaan kasoo jeedaan Ciidamada AL-Shabaab ka tirsan ee ku sugan dhulka Puntland isla markaasna weerarada ka geysto halkaas.
General Saciid Maxamed Xersi Saciid Dheere oo ah taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa waxaa uu ka hadlay weerarkii uu dhiigga badani ku daatay, ee Shabaabku subaxnimadii Khamiista ku qaadeen saldhiga Ciidamada Puntland ku leeyihiin Deegaanka Af urur ee Gobolka Bari.
Taliyaha, ayaa marka hore beeniyay in rag ka soo goystay Shabaabka, kuna sugnaa saldhiga Af urur, ay gacan ka gaysteen weerarkii Shabaabku ku qabsadeen saldhigaasi.
Taliyaha oo la weydiiyay waxa ka jira in Shabaabka ku sugan Deegaanada Puntland, ay ka soo gudbaan kontoroolada ku yaala Magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso, ayaa sheegay in badankoodu ka yimaadan Koonfurta Somaliya, waxna ay soo maraan Deegaanada Somaliland.
“Dadkan sida ay u badan yihiin Koonfur bay ka yimaadan, Waqooyina waa soo maraan. Waxna Waqooyi Galbeed bay ka yimaadan, waxna waxay ka yimaadan Koonfur oo Waqooyi Galbeed bay soo maraan. Waxna waa suurtagal Puntland laftigeeda inay meelo ka mida soo maraan.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha oo u waramay Radio Daljir, ayaa sheegay Shabaabku in si qarsoodi ah ku soo galaan Magaalooyinka Puntland, sidaasina ay ku garaan Buuraleyda Gobolka Bari.
Su’aal ahayd sida ay Shabaabku ugu suurtagashay inay ka gudbaan kontoroolada Puntland, iyagoo gaadiidka saaran, ayaa waxaa uu sheegay inaanay jirin cid ay wejiga uga qoran tahay inay Shabaab tahay.
“Qof Shabaab wejiga kaga qoran tahay ma jiro, waa uun Soomaali yaaceysa, Soomaalina waa abaareysan tahay, waa dhiban tahay, waa wax la’dahay, waa tahriibeysaa, waa carareysaa. Marka in nin dhiban lagu tacadiyana runtii aad baa looga taxadaraa, laakiin maaha amni xumo qari-daariso ka jirta Puntland, ciidamadeeda iyo meelaha la marayo, midna.” Ayuu yiri General Saciid Dheere.
Mar wax laga weydiiyay tuhunka ka galay in Shabaabku ka yimaadan Deegaanada Somaliland, ayuu sheegay in muddooyinkan dambe ay noqotay wado loo soo maro dhinaca Puntland.
Weerarka ayaa ka dhacay degaanka Af-urur oo ka tirsan Galgala oo Boosaaso u jirta 70 km, halkaas oo uu ku yaallay saldhig militari oo ay leeyihiin ciidammada daraawiishta ee Puntland.